Fitsanganana sy famonjena… | NewsMada
Fitsanganana sy famonjena…
Paska na Paka indray izao… Toy ny isan-taona, samy manana ny fomba hankalazany izany ny tsirairay, isan-tokantrano, isam-piangonana… Fety kristianina fahatsiarovana ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, nanolorany ny aina ho fanafahana ny olombelona amin’ny fahotana sy ho famonjena izao tontolo izao aza.
Tsy misy ny Paska, raha tsy misy ra latsaka: “Raha tsy maty ny voam-bary latsaka ao amin’ny tany, dia mitoetra irery; raha maty kosa izy, dia mahavokatra be.” (Johany 12: 24, Diem). Izay ny Paska, fitsanganana amin’ny maty ho famonjena. Aiza ho aiza ny tsirairay? Samy mandini-tena raha mitoetra amin’ny finoana na tsia.
Amin’ny fiainam-pirenena, amin’izao tontolo izao: aiza ho aiza izay hoe fitsanganana sy famonjena izay? Latsaka an-katerena tsinona ny firenena amin’izao, ao anaty fahalovana tanteraka: tsy fandriampahalemana, tsy fanarahan-dalàna, fanjakan’ny kolikoly, fisian’ny tsimatimanota, fanjakazakan’ny vahiny…
Mba hisy sahy hitsangana sy hanolo-tena ho amin’ny famonjena izany ve? Ny mpankalaza ny fitiavan-tanindrazana izao no manombo azy amin’ny fampahantrana sy ny fampahoriana vahoaka. Tsy inona fa ny fivarotan-tanindrazana, ny famelana ny vahiny mandroba ny harem-pirenen’ny tena… Aiza ny fahatsiarovan-tena?
Ao anaty fahalovana tanteraka ny firenena; maty ny vahoaka, (na)latsaka an-katerena na amin’ny tany. Nefa tsy hita izay vokatra, firy tao-maty izay? Tsy misy dikany sy vidiny izay fiaretana sy fihafiana, fa tsy mitondra inona ny fampiandrasana lava amin’ny hoe mila fotoana ny fanarenam-pirenena sy ny fampandrosoana.
Fotoana fandinihan-tena sy fieritreretana izao, ho aiza marina ny tena sy ny firenena? Rehefa tsy manaiky hiova sy hanova ny zava-misy tsy azo leferina sy iaretana intsony, ovaina sy miova ho azy amin’ny fiandrasana sy fanantenana tsy misy. Nefa mora foana ny mamoy, raha mafy sy sarotra ny mamoy ny ainy ho an’izay tiana.
Fotoam-pitsanganana sy famonjena izao, fanoloran-tena… Mirary Paska na Paka sambatra ho antsika rehetra!